Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLuigi
I-chalet esandula kunikwa ingqalelo ekhethekileyo kwisitayile kunye nendawo ekuyo ipropathi, uhleli kwindawo yokuphumla unokonwabela umbono omangalisayo we-Etna.
Ifumaneka kwindawo ephakamileyo yeemitha ezili-1140 ejikelezwe buhlaza bepaki ye-Etna, kufuphi kakhulu neMaletto, Bronte, Randazzo.
Izilwanyana zasekhaya zivumelekile, ukuba awuzivumeli ukuba zingene kwiisofa kunye neebhedi.
Umabonwakude wescreen esicaba, imp. istiriyo esineCD, ishawari ye-hydro enenkqubo yestereo, izibane ze-LED kunye neziko.
I-Casa Monte Etna chalet ibekwe kwindawo esezintabeni, ezolileyo, ezolileyo kunye nelanga KUPHELA i-1500 m ukusuka kumbindi weMaletto, kunye nombono omangalisayo weNtaba i-Etna kunye negadi enkulu. I-Casa Monte Etna yi-chalet ye-Etna eqhelekileyo yalungiswa ngo-2012; igqitywe ngamaplanga, ilitye kunye nezitena kwaye inikwe ifenitshala esemgangathweni kwi-fir wood, yonke into eyenza i-chalet ibe nomoya ofudumele kunye nowamkelekileyo. Ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela kukho iikeramics ezenziwe ngokucacileyo ngabachwephesha bendawo, abanika umnxeba othile kunye nokhethekileyo kwindawo. Ithafa kunye negadi yonwabela umbono omangalisayo wentaba-mlilo.Ehlotyeni nasentwasahlobo igadi kunye nethafa yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana isidlo sasemini phantsi kweambrela okanye utye ngokukhanyisela ikhandlela. Ikhitshi lixhotyiswe kakuhle kwaye izixhobo zombane zintsha. Ibhedi ephindwe kabini yi-160 cm. I-chalet ifikeleleka ngokulula kwi-SS284 (imizuzu emi-3). Ebusika izitrato zihlala zicocekile Ipaki yemoto ikwipropathi ye chalet.
I-atmosphere kule ndawo iyamangalisa, ungakonwabela ukuzola okuphezulu, ipropathi kunye nokuntywiliselwa kwi-Etna Park ijikelezwe ngamaplanga amangalisayo apho unokuthatha uhambo olude, ujonge i-porcini kunye namakhowa e-ferula.
Phakathi kukaNovemba noDisemba unokuphefumla ukuqala kweeholide zeKrisimesi phantsi kwe-Etna kwaye ungcamle zonke iziqhamo ezomisiweyo ezingaswelekiyo kwindawo yethu kula maxesha, akusayi kubakho thuba lingcono lokungena kwihlathi elimangalisayo le-Etna kwaye uhlale kwindawo yethu. impahla ukuchitha ixesha ongenakulibaleka.
Siyafumaneka kulo naluphi na ulwazi olunokuba luncedo kwiindwendwe, malunga nendlela yokufikelela kwaye yintoni enokwenziwa ngaphakathi kweendawo ezikhuselweyo, indlela yokufikelela kwiindawo zepikiniki nakuyo yonke into enokuba luncedo ekuchitheni iintsuku ezimnandi endlwini yethu.
Siyafumaneka kulo naluphi na ulwazi olunokuba luncedo kwiindwendwe, malunga nendlela yokufikelela kwaye yintoni enokwenziwa ngaphakathi kweendawo ezikhuselweyo, indlela yokufikelel…